सैफअली खान छोरी साराको सहारामा हिट हुने दाउमा ! — Harpraharnews.com
सैफअली खान छोरी साराको सहारामा हिट हुने दाउमा !
बलिउड अभिनेता सैफ अली खानको करिअर सही लिकमा चलिरहेको छैन । कतिपयले उनको करिअर समाप्त हुन लागेको टिप्पणी पनि गर्न थालेका छन् । बरु अहिले अत्यधिक चर्चा छ उनकी छोरी साराको ।
साराले फिल्म ‘केदारनाथ’ बाट बलिउडमा डेब्यू गर्दैछिन् । यो फिल्मको सुटिङ सकिएको छ भने पोष्ट प्रोडक्सनको काम भइरहेको छ । यसैगरी उनको हातमा अर्को फिल्म पनि छ सिम्बा । रोहित सेट्टी निर्देशित यो फिल्मको सुटिङ जारी छ ।
हिट फिल्मको खोजीमा रहेका सैफ अलीलाई अब छोरी साराको सहारा चाहिएको छ । आफूलाई हेर्न दर्शक नआउनेमा विश्वस्त रहेका उनी छोरीलाई हेर्न पक्कै आउने आशामा छन् । त्यसैले छोरीसँगै फिल्म खेलेर आफ्नो डुब्न लागेको डुंगा जोगाउने सोचिरहेका छन् ।
यहि बीचमा सैफले सोचेजस्तै अफर लिएर आए निर्देशक नितिन कक्कड । ‘फिल्मीस्तान’ बाट चर्चित बनेका यी निर्देशकले सैफ र सारालाई बाबुछोरीको भूमिकामा प्रस्ताव गरेको बुझिएको छ । र सैफले. फिल्मको स्त्रिप्ट मन पराइसकेका छन् । यो फिल्मलाई ज शेवारमानीले निर्माण गर्नेछन् ।
आमिरले आफूलाई मन नपरेको प्रोजेक्ट धकेले शाहरुखलाई, शाहरुखले गरे स्वीकार
फ्यानहरुले कट्रिनालाई भने – ‘हामी सलमान खानको लागि आएका हौ’, तिम्रो काम छैन’, छक्क परिन् कट्रिना